Football Khabar » बालोन डि‘ओरबारे रोनाल्डोको आफ्नै दाबी : मेस्सी र भान डाइकबारे के भन्छन् ?
बालोन डि‘ओरबारे रोनाल्डोको आफ्नै दाबी : मेस्सी र भान डाइकबारे के भन्छन् ?
सन् २०१९ को विश्व फुटबलको प्रतिष्ठित अवार्ड बालोन डि‘ओरका लागि स्पेनिस बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी, इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र इंग्लिस क्लब लिभरपुल तथा नेदरल्यान्ड्सका भर्जिल भान डाइकलाई प्रमुख दाबेदार मानिएको छ ।
गत सिजन आफ्नो टिमलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भान डाइक नयाँ अनुहारका रूपमा अघि आएका छन् भने पाँच–पाँचपटक बालोन डि‘ओर जितसिकेका रोनाल्डो र मेस्सी यसपटक छैटौंपटक यो अवार्ड जित्ने दौडमा छन् ।
यसैबीच, रोनाल्डो भने यसपटक छैटौंपटक बालोन डि‘ओर जित्नेमा निकै आशावादी रहेका छन् । फरक लिगमा गएर दुई उपाधि जितेको र अन्तर्राष्ट्रय उपाधिसमेत जितेकाले उनले आफूलाई यसपटक सो अवार्डका लागि दाबेदार ठानेका हुन् ।
यसै साता ‘मार्सा लिजेन्ड अवार्ड’ थाप्न स्पेन पुगेका उनले ‘एएस’सँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘अवश्य पनि म आशावादी छु, यसपटक म यो अवार्ड जित्छु । मैले हरेक वर्ष यो अवार्ड जित्न पर्याप्त गर्दै आएको छु ।’
रोनाल्डोले अघि थपे, ‘मुख्य कुरा यो हो कि, मैले मड्रिड छाडे पनि त्यहाँजस्तै यहाँ पनि खेलिरहेको छु । र, जितिरहेको छु । ३३ वर्षको उमेरमा मड्रिड छाडेर कुनै नयाँ क्लबमा गएर खेल्नु सजिलो हुँदैन । तर, मैले त्यो गरें । गरिरहको छु ।’
रोनाल्डोले गत सिजन आफ्ना लागि उपलब्धिका हिसाबले राम्रो भएको पनि बताए । ‘मेरा लागि गएको सिजन साँच्चै राम्रो थियो । मैले इटालियन लिग र सुपरकोपा जितें । पोर्चुगलबाट युइएफए नेसन्स लिग जितें । मेरो करिअरमध्ये यो एक उत्कृष्ट सिजन हो,’ रोनाल्डोले भने ।
रोनाल्डोले गत सिजन आफूले व्यक्तिगत र टिमका हिसाबले पनि पर्याप्त गरेको बताए । ‘व्यक्तिगत ठूला अवार्ड जित्न मैले गत सिजन व्यक्तिगत र टिमका हिसाबले पनि मनग्ये गरेको छु,’ उनले जोड दिए ।
बालोन डि‘ओरका अन्य प्रतिस्पर्धी बासिलोनाका मेस्सी र लिभरपुलका भान डाइकबारे सोधिएको प्रश्नमा रोनाल्डोले उनीहरूले गत सिजन राम्रो गरेको बताए । ‘उनीहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ । दाबेदार सबैप्रति सम्मान छ । लियो र भान डाइक दुवैले राम्रो गरेका छन्,’ रोेनाल्डोले थपे, ‘तर, यी अवार्ड जित्न व्यक्तिगत प्रदर्शन र उपाधि दुवै आवश्यक हुन्छ । पर्खौं र हेरौं ।’
गत सिजन रोनाल्डोले युभेन्टसका लागि कूल २८ गोल गर्दै १२ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए । उनकै प्रेरणामा युभेन्टसले सिरी ‘ए’ र सुपरकोपा इटालिया जितेको थियो भने पार्चुगलले नेसन्स लिग जित्दा पनि रोनाल्डोकै योगदान प्रमुख रह्यो । उनले सो प्रतियोगितामा ३ गोलसहित सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए ।
प्रकाशित मिति १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:५६